Somaliland ay ku leeyihiin horumarka dalka, dhinaca dhaqaalaha, oo ah mid wali socda oo aan dhamaanin, waxa suurtogashay in natiijo laga soo saaro magaalada Hargeysa ee caasimadda ah, taasoo ay hay’addu u soo bandhigtay xubnihii ganacsatada qurba-joogga ahayd ee shirkaas ka soo qayb galay. Dhinaca kale, ka dib markii ay soo bandhigeen maxsuulkii darasaada, waxa gudoomiyaha hay’adda Mudane C.cabdullaahi Dayax-weerar oo shirkaa furay, agaasimaha fulinta Mudane Xassan Yusuf iyo saraakiil waaxda cilmi-baadhista ee hay’addu dhagaysatay waxyaabihii ay halkaa ka soo jeediyeen xubnahaasi qurba-joogga ah, oo u badnaa caqabadaha ka haysta ganacsigooda.
Xubnahaas oo dhamaantood qurbo-joog ganacsato ahaa, waxay soo jeediyeen cabado ay ka sinaayeen iskuna raaceen oo ay ka midyihiin qaabka cashuurta looga qaado oo ah mid aan u daneyneyn ganacsiga, xidhiidhka u dhexeeya ganacsatada qurba-joogga ah iyo kuwa qaran-joogga ah oo aan ahayn sidii loo baahnaa, dhaqanka shaqaalaha muwaadiniinta qaran-joogga ah oo ah mid aan ku habooneyn habsami u socodka shaqada iyo maqnaanshaha nimaadka kala xadaynta ganacsiga.
Kulankan oo ka mid ah kulanno taxane ah oo ay hay’addu ugu talogashay inay la yeelato dadka qurba-joogga ah sanadkan 2018, si ay u xog-waraysato uguna gudbiso cidii ay khuseyso, talooyinka iyo warbixinnaha ay u baahanyihiina siiso, waxay xubnihii ka soo qayb galay ka cawdeen in qaabka casuurta ee xukumadu uu yahay mid cabsi ku ah maalgashiga. Waxa ay sheegeen in cashuur qaadayaashu aanay waxba ka galin hadii ganacsigu macaash sameeyo iyo hadii uu khasaaraba, oo ay rabaan uun lacag cashuur ah. Waxayna sheegeen, inay ka rajaynayeen xukumadda qaab cashuur qaadis oo dhiirigaalinaysa maalgashiga waddanka, sida in bal ganacsiyada bilawga ah xaaladiisa cashuur-qaadayaashu ula socdaan, sida bal inay ka dhaafaan sanadka ugu horeeya ee uu ganacsiga cusibi ku jiro khasaaraha. Waxa kale oo ay sheegeen in looga hiiliyo ganacsiga shiisheeyaha ganacsiyadooda ka muwaadin ahaan. Tusaale ahaan waxay sheegeen in ganacsiyada shisheeyaha ah loo sameeyey wax loo yaqaano Tax holiday, taasoo macnaheedu yahay in laga dhaafo cashuurta marmarka qaar.
Xubnahaasi waxay ka dhawaajiyeen in xidhiidhka ganacsatada qurba-joogga ah iyo kuwa qaran-joogga ahi aanuu ahayn mid sahli kara in la iskaashiga koboca dhaqaalaha waddanka. Waxay sheegeen in aanay ka qurbo-joog ahaan wax soo dhawayn ah iyo isu-tudhid ah anaay kala kulmin ganacsatada qaran-joogga ah, tusaale ahaan bal in xataa ay ka helaan amaah iwm.
Mar la isweydiiyey sababta qurba-jooggu u shaqaalaysiiyaan ajanabiga, waxyaabaha layaabka leh ee u baahan in lagu baraarugo oo wax laga barto ee ay isku raaceen waxa ka mid ahaa, in dhaqanka shaqaalaha muwaadiniinta qaran-joogga ah ee ka shaqeeya ganacsiyadoodu anuu ahayn mid ku haboon habsami u socodka shaqada. Tusaale ahaan, Marwo Sucaad oo ah mulkiilaha hudheelka cuntada ee Laaleys waxa ay tidhi, ‘waxaan ku kalsoonahay in shaqaalahayga hindiga ahi uu shaqada soo galayo kana baxayo xiligii loogu talagalay, halka uu kan kale ee muwaadinka ahi laablaabka iyo ku fasax-qaadashada cudurdaarka beenta ku dheereeyo.’ Waxa kale oo arintaas xoojiyey mulkiilaha Adams Inn Mr. Adam waxana uu yidhi, ‘Waxaan saaka meheradeydii tagay 5:00 am ee subaxnimo sababtuna waxay ahayd inaan ka cabsi qabay in dib u dhac ku yimaado adeega uu bixinayo hudheelka maadaama ay joogeen macaamill tirabada oo qaarna cusub yihiin. Waxay sheegeen in ayna cidkale iyo shaqaale kale oo waliba qaali ah aanay ku doorsadeen walaalahooda muwaadiniinta ah.
Waxa sidoo kale la isla soo qaaday sida ay uga maqan tahay siyaasadda qaran ee dhaqaalaha, ahmiyadsiinta kala xadaynta ganacsiga iyo sharciga xoojinta heshiisyadda ganacsi ee dhex mara muwaadiniinta. Tusaale ahaan, waxa mar walba dhacda in ganacsadaha jimladlaha ahi uu ku darsaday taafaariiqeyntiina. Waxay carabka ku adkeeyeen sida ay u maqantahay waajibaadkii dawlidnimo ee dharista xuquuqda muwaadinka ganacsadaha ah. Tusaale ahaan, mulkiilahaa Berbra Café waxa uuu xusuay in shaqaale ajanbi ah oo uu keenay waddanka ganacsade si uu shaqaale ugu noqdo, ay dhacdo in ganacsade kale kala boxo oo uu ka kaxaysto, taas oo xad-gudub ku ah xuquuqda ganacsadahaas.
Ugu dambeys waxa la isla gartay in kulan ay xubno wasiiro ah oo xukumadda ah ay ku jiraan la qabto mustaqbalka dhaw si loo dhiirigaliyo maal-gashigga muwaadiniinta qurba-joogga looguna bandhigo caqabadaha ay la kulmaan ee mijo-xaabinta ku ah horumarka dhaqaalaha dalka J.Sl.